June 8, 2019 अखवार अनलाइनLeaveaComment on ट्युशन पढन आउने विद्यार्थीलाई शिक्षकले बनाउको यौनको शिकार, अश्लील भिडियो भयो लिक ! गाउँमा मच्चियो हंगामा
काठमाडौ २५ जेठ । भारतको चम्पारणको केसरियामा एक शिक्षकले मर्यादाको रेखा नाघेर पवित्र सम्बन्धलाई लज्जित बनाइदिएका छन् । त्यहाँको चाद पसरास्थित मध्य विद्यालयका प्रधान शिक्षकको यो कर्तुतले पुरै इलाका स्तब्ध बनेको छ ।
शिक्षक रुपेश कुमार सिंहले आफ्नै विद्यालयकी एक नाबालिक छात्रालाई यौनसिकार बनाएका थिए । यो अवैध सम्बन्धको अश्लील भिडियो समेत लिक भएपछि भाइरलै बनेको छ । यो घटना प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनुपम कुमारको जनता दरबारसम्म पनि पुगेको छ । डीडीसीको आदेशमा डीईओले घटनाको जाँच गरिरहेको छ ।
यसैबीचमा विद्यालयका अध्यक्ष जितेन्द्र कुमार मिश्राले पनि प्रहरीमा मुद्दा दर्ता गराएका छन् । तर, प्रहरीले न्यायालयबाट पक्राउ पूर्जी नपाएका कारण अहिलेसम्म आरोपी शिक्षकलाई गिरफ्तार गरेको छैन् ।
ट्युसन क्लासमा भयो सेक्स
समाचार अनुसार मध्य विद्यालयका शिक्षक रुपेश कोचिङ क्लास पनि चलाउथे । उनले कोचिङमै विद्यालयकी छात्रालाई आफ्नो सिकार बनाएका हुन् । त्यही बेला भिडियो क्लिप बनेको थियो । प्रहरीले भिडियो कसले बनायो र छात्रासँग अरुले पनि अवैध सम्बन्ध राखे की भन्ने बारेमा अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
भिडियो नै सार्वजनिक भएपछि रुपेशलाई जागिरबाट बर्खास्त गरिएको छ । प्रहरी उपरीक्षक मुन्द्रिका प्रसादले घटनाको प्रहरीले सुक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन् । एजेन्सी
पुरुषहरु किन सेक्सका लागि आफुभन्दा बढी उमेरका महिला चाहन्छन ?
नियमित सेक्स गर्ने महिला कसरी चिनिन्छन् ?